विराटमा जटिल प्रसूति समस्याको कारण सुत्केरीको मृत्यु
मुख्य पृष्ठप्रदेश १विराटमा जटिल प्रसूति समस्याको कारण सुत्केरीको मृत्यु
विराटनगर । सुत्केरी व्यथा लागेर विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल टङ्कीमा भर्ना भएकी ३३ वर्षीया महिलाको जटिल प्रजनन समस्याको कारण मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
१८ पुसमा अस्पताल भर्ना भएकी इटहरी–३ सुनसरी स्थायी घर भएकी गङ्गादेवी दाहालको मृत्यु भएकाे थियो ।
चिकित्सकको लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै आफन्तहरूले अस्पतालको भवनको झ्याल, टेबल कुर्सीलगायतका भौतिक सामग्रीहरूमा क्षति गरेको अस्पतालका प्रयोगशाला प्रशासन प्रमुख प्रमेशराज देवकोटाले बताए ।
बिरामी अस्पताल आइपुग्दाको अवस्था बच्चाको साल पाठेघरसँगै पिसाबथैलीसम्म छेडेको थियो, जसका कारण अत्याधिक रक्तश्राव भई उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
सालनाल (प्लासेन्टा) भन्दा बच्चा माथि रहेको हुनाले नर्मल डेलिभरि कुनै पनि हालतमा सम्भव नभएका कारण शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिइएको अस्पतालका वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. अमित देवले बताए ।
नियमित गर्भ परीक्षण बाहिरै गर्नेगरेको पनि बताउँदै उनले सुत्केर गराउनुभन्दा पाँच–छ दिनअगाडि मात्र विराट मेडिकल कलेजमा जचाँउन आएको बताए । ‘अस्पताल आउनुअघि गङ्गाको एक पटक पनि भिडियो एक्सरे गरिएको थिएन । सालनाल (प्लासेन्टा) भन्दा बच्चा माथि भएकोले नर्मल डेलिभरि सम्भव नभएकाले हामीले अपरेशन नै गर्न सुझाव दिएका थियौँ । बच्चाभन्दा तल सालनाल ( ककम्लीट प्लासेन्टा) को अवस्थामा आउनसक्ने जटिलताको विषयमा मृतकका आफन्तलाई भिडियो काउन्सेलिङ नै गरेको थियौँ,’ उनले भने ।
काउन्सेलिङ गरेको भिडियोसमेत रहेको उनले बताए । आफन्तको मन्जुरीनामा गरेर नै अपरेशसन गरेर बच्चा निकालिएको बताउँदै उनले शल्यक्रियापछि अत्यधिक रक्तश्राव भएकोले गङ्गाको पाठेघर निकाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । परिवारको मन्जुरीमा नै पाठेघर निकालिएको डा देवले जानकारी दिए ।
अपरेशसन गर्दा बिरामीको सालनालले पाठेघर छेडेर पिसानथैलीसमेत छेडिएको अवस्था देखिएको उनी बताउँछन् । बिरामीको अत्यधिक रक्तश्राव भएको कारणले अपरेशनको दौरानमै पनि छ पिन्ट रगत चढाइसकिएको थियो । अपरेशनपछि पनि बिरामीको आफन्तलाई बिरामीको जटिलताको बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
अपरेशसन जटिल भएको कारणले पाँच जना वरिष्ठ स्त्रीरोग विषेशज्ञको टोली सङ्लग्न रहेको उनले बताए । आफ्नो ११ वर्षे चिकित्सक अभ्यासमा यस्तो जटिल प्रसूति समस्याको दोस्रो पटक सामना गर्नुपरेका उनले बताए ।
स्त्रीरोग विशेषज्ञ टोलीको उपस्थितिमा शल्यक्रिया गरेर बिरामीलाई आइसियूमा राखिएको र केही घण्टापछि बिरामीको मृत्यु भएको थियो ।
साल बच्चाभन्दा तल भएको भने पनि जटिल केस हो भनेर नभनेको मृतकका आफन्तले बताएका छन् । ‘अस्पतालले जटिल समस्या भनेको भए हामी अन्यत्रै लैजाने थियौँ’, मृतकका देवर महेश घिमिरेले भने।
अघिल्लो बच्चाको पालामा पनि डा. सङ्गीता मिश्रले यस्तै समस्या बताएर अन्यत्र अपरेशन नगर्न सुझाव दिएको उनले बताए । अस्पतालले जानी–नजानी गल्ती भएको स्वीकारेपछि आफूहरूले शव बुझेको मृतकका अर्का देवर देवीप्रसाद घिमिरेले बताए ।